Bogga ugu weyn 20 QALABKA UGU FIICAN Fiidiyowga U Sameeya Bilowga 2021
Miyaad raadineysaa siyaabo aad kor ugu qaaddo Roi -gaaga?
Sameynta fiidiyaha waa mid ka mid ah siyaabaha aad taas ku gaari karto.
Sida laga soo xigtay Gobolka Wyzowl ee Sahanka Suuqgeynta Fiidiyowga, warbixin sanadle ah, oo hadda ah tii toddobaad.
Waxay sameeyeen natiijooyinkan muhiimka ah ee soo socda ka dib cilmi baaris la sameeyay 2021 taas oo ah: illaa hadda, 86% ganacsiyada waxay u adeegsadaan fiidiyaha aalad suuqgeyn, iyagoo waxyar ka kordhay 85% sannadka 2020.
Hadda, isbarbar dhigga natiijooyinka sahanka su'aasha "Suuqgeynta fiidiyaha miyuu muhiim yahay?"
"Fiidiyowgu ma ku siiyaa ROI togan?"
Waqtiga fog sida suuqgeeye, waxaad ogaan doontaa in samaynta fiidiyaha ay tahay maalgelin weyn oo loogu talagalay jiilka saldhigga macmiilka iyo macmiilka. sababtuna tahay xaqiiqda ah in 84% suuq -bixiyeyaasha fiidiyayaashu ay yiraahdaan fiidiyowyadu waxay wax ku ool u ahaayeen soo -saaridda hoggaamiyeyaasha, ilaa 1% laga bilaabo 2020.
94% suuqleyda ayaa isku raacay in fiidiyowyadu ay gacan ka geysteen kordhinta fahamka isticmaale ee badeecadooda ama adeeggooda, iyada oo 43% ay soo wariyeen in fiidiyowgu uu yareeyay tirada wicitaannada taageerada alaabada ee shirkadoodu heshay.
Markaa looma baahna in la yidhaahdo sahankan kor ku xusan, sida suuqgeeye, waxaad u taagan tahay fursad wanaagsan oo aad kor ugu qaadi karto iibkaaga xitaa bilowga samaynta fiidiyaha.
Sidoo kale, haddii aad damacsan tahay inaad dhex gasho samaynta fiidiyowga oo ah ilaha maciishadda, markaa kani waa maqaalkii aad marka hore u tixgelin lahayd bilowga, ka dibna sidoo kale xirfadle ahaan.
Markaa guud ahaan marka la hadlayo, samaynta fiidiyowga ayaa laga yaabaa inay leedahay ujeeddooyin kala duwan, oo laga yaabo inay tahay
Kordhinta suuqaaga iyada oo loo marayo kordhinta ROI.
Hiwaayad ahaan ..
Si kastaba ha ahaatee, si aad u fuliso ujeedooyinkan waxaa jira qalabyo la isticmaalayo. Kaas oo noo keenaya khudbaddeena “Fiidiyowga ugu Fiican ee Samaynta Qalabyada Bilowga 2021”.
MUXUU YAHAY AALADAHA UU SAMEEYO MUUQAALKA IYO MAXAA LOO ISTICMAALAY.
Asal ahaan, aaladaha fiidiyowga sameeya waa softwares ama codsiyo ku siinaya fursad aad ku maareyn karto fiidyowyada, oo ay ku jiri karaan kala -jajabinta, habeynta iyo jarista goos -goosyada marka la samaynayo fiidyowyada. Qodobka kale ee aan laga fiirsan ayaa ah in aaladaha samaynta fiidiyaha iyo aaladaha tafatirka fiidiyaha laga yaabo in loo adeegsado wada -hadalkan.
Horumarka samaynta fiidiyaha, rajadaada ayaa sidoo kale sii ballaarisay adiga oo aan ku xaddidnayn goynta iyo googoynta goosgoosyada halkii, waxaad ka heli kartaa qalabyo fiidiyowyo kala duwan leh oo leh shaqooyin badan oo kala duwan sida khalkhalgelinta midabka iyo is -waafajinta muuqaalka maqalka ee taxanaha filimka.
Iyada oo leh noocyo badan oo ah aaladaha samaynta fiidiyowga ee khadka tooska ah, way kuu fududaan doontaa adiga bilowga ah inaad samayso doorasho khaldan, ama aad lumiso waqti iyo tamar macquul ah tijaabinta aalado badan kahor intaadan helin mid ku habboon. Soo bandhigidani waxay gacan ka geysan doontaa yareynta walbahaarkaas.
Kuwa soo socda ayaa ah 20 ugu fiican oo bilaash ah ama si fudud loo awoodi karo qalabka samaynta fiidiyowga 2021 iyo sida loo isticmaalo.
Waxa kale oo aad ka heli doontaa iskuxirka si aad iyaga hoos ugu hesho.
WAXYAABAHA UU KA DHIGAY VIDEO -GA.
Tifaftiraha fiidiyowga VIDEOPAD/Sameeye
VSDC VIDEO MAQER
XAQIIQDA PREMIER ADOBE.
Blender waa aalad samaynta fiidiyowga il furan oo qiimaheedu yahay eber Doolar. Aaladda waxaa loo naqshadeeyay inay tahay 3D iyo 2D suugaanta animation, laakiin waxay la timid barnaamij tafatiraha fiidiyaha oo aad u wanaagsan. Tifaftiraha fiidiyaha Blender waa inuu ku filnaado inta badan baahiyahaaga fiidiyaha bilow ahaan.
Tifatiraha ayaa sidoo kale kuu oggolaanaya inaad fuliso ficillada aasaasiga ah sida jarista fiidiyaha iyo kabidda. Waxa kale oo ay noqon kartaa adeeg weyn haddii aad u baahan tahay inaad qabato hawlo aad u adag sida maaskaro fiidiyaha. Tani waxay ka dhigeysaa tifaftiraha fiidiyaha oo aad u dabacsan oo u adeegta bilowga iyo adeegsadayaasha sare labadaba.
Kuwa soo socda ayaa ah astaamaha muhiimka ah ee tifaftiraha fiidiyaha Blender:
Horudhac toos ah,
Isku -dhafka maqalka,
iyo muuqaalaynta mawjadda.
iyo qaar badan oo.
Qalabkani wuxuu ugu fiican yahay sameynta fiidiyowyada 3D iyo 2D iyo animations.
Waxaad ka heli kartaa degelkooda rasmiga ah.
Hoos waxaa ah isku xirka cashar kooban oo ku saabsan sida loo isticmaalo aaladaha samaynta fiidiyowga Blender ee bilowga ah:
2. VIDEOPAD VIDEO MAQER.
Bilowga, VideoPad waa bilaash, si buuxda u-muuqaal-sameynta fiidiyaha iyo tafatirka barnaamijka cum software-ka loogu talagalay
Software NCH ee Mac, Windows, iOS, iyo adeegsadayaasha Android. Xalku wuxuu muujiyaa is -dhexgalka adeegsadaha kaas oo ka dhigaya goob taran oo ku habboon kuwa bilowga ah ee weli ku jira da 'ahaan marka la eego samaynta fiidiyaha iyo tafatirka booska ama meheradaha yaryar ee ka bilaabaya suuqgeynta fiidiyaha. Boodh -ka fiidiyaha ayaa leh qalab wax -qabad oo maqal iyo muuqaal ah, kaas oo si joogto ah u caawiya samaynta/tafatirka fiidiyowga hawl fudud xitaa kuwa bilowga ah ee goobta jooga.
Waxaa lagama maarmaan u ah qayb ka mid ah aaladdan ayaa ah iyada oo la adeegsanayo VideoPad, tafatirka fiidiyowyada 360-digrii waa u fududahay sida tafatirka filimada dhaqanka. Si kastaba ha noqotee, bilow ahaan, waxaa laga yaabaa inay tahay hawl sare oo lagu daro fiidiyow 360-digrii ah. Waxa kale oo lagu qalabeeyaa 50+ muuqaal iyo saamayn ku meel gaadh ah. Asal ahaan tababar joogto ah, muuqaalkeeda fudud ayaa kaa caawin doona abuurista taabashada xirfadeed ee fiidiyaha, xitaa kuwa bilowga ah.
Videopad wuxuu leeyahay aalado kaalin weyn ka qaata habaynta habyaalada adeegsiga mustaqbalka. Waxaa jira kala -guurro badan, sida milmi, libdhi, zoom, iskudhafid, iyo in ka badan oo loo adeegsan karo inta u dhexeysa fiilooyinka.
Tilmaamaha Muhiimka ah ee VideoPad
qaababka fiidiyaha ee caanka ah.
3D iyo 360-degree video tafatirka.
kala -guurka badan iyo saamaynta muuqaalka.
UI fudud oo dareen leh.
Waxay bixisaa qalab maqal oo dhijitaal ah.
Oo waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay dhoofiyaan fiidiyowyo si ay u fayl gareeyaan ama u duubaan.
3. DAVINCI XAL
Qalabkan samaynta iyo tafatirka fiidiyaha ayaa ka dhex muuqda kuwa kale, oo leh baakad ballaadhan oo astaamo ah iyo la jaanqaadka fiidiyaha, xogta, maqalka iyo qaabaynta muuqaalka.
Kuwaas waxaa ka mid ah qaababka fiidiyaha sida AVI, MP4, QuickTime, DNxHD, iyo qaababka is -weydaarsiga xogta sida XML, EDL, AAF, DCP, MXF, iyo Cinema DNG, iyo waliba qaabab maqal ah sida AAC,  AIFF,  iyo WAVE;  iyo qaababka muuqaalka sida RAW, Open EXR, TIFF, DPX R3D, JPEG, iyo JPEG 2000.
Sidoo kale gunno kale oo softiweerkan ah ayaa ah iyada oo aan loo eegin 7 -da bog ee istcimaalka isticmaaleha, Waxay leedahay hanti badan oo hageyaal bilow ah iyo casharro laga heli karo khadka tooska ah oo aad ka dheefsan karto.
Waxay sidoo kale la socotaa suugaanta saamaynta fiidiyaha ee Fusion iyo barnaamijka tafatirka maqalka ee Fairlight oo lagu dhex dhisay sixitaanka midabka iyo isku darka maqalka, maxaad kaloo raadin kartaa.
Tilmaamahan ayaa sidoo kale lagu heli karaa eber doolar.
DaVinci Resolve sidoo kale waxay leedahay qalab adag oo ku habboon hagaajintiisa sida DaVinci Resolve Micro Panel, DaVinci Resolve Mini Panel (labadaba la sii daayay 2017), iyo DaVinci Resolve Advanced Panel (oo hore loogu yiqiin Impresario markii ay soo saartay da Vinci Systems)
Si kastaba ha ahaatee, si aad u isticmaasho sifooyin gaar ah oo aad muhiim u ah, waxaa laga yaabaa inaad bixiso lacag gaar ah.
In kasta oo ay la mid tahay nooca bilaashka ah, nooca istuudiyaha DaVinci Resolve, waxay taageertaa qaraarrada ka weyn qeexitaanka aadka u sarreeya iyo xaddiga qaab-dhismeed ka weyn 60 FPS. Dhinacyada kale ee shaqeynta kaliya ee laga heli karo daabacaadda ganacsiga waxaa ka mid ah taageeridda GPU-yada badan, furayaasha furan ee OpenFX (sida Raad-raaca Wajiga iyo Lens Flare), qiimeynta stereoscopic, yareynta buuqa fiidiyowga, qulqulka dhaqdhaqaaqa, qiimeynta midabka HDR, iyo qalabka wada-shaqeynta adeegsadaha.
Nooca Istuudiyaha ayaa sidoo kale ah daabacaadda kaliya ee lagu daro shaqooyinka barashada mashiinka ee la soo bandhigay oo qayb ka ah Xallinta nooca 16.
Software -ka Fairlight waxaa loo isticmaalay soo saarista filimada, sida Logan iyo Dil oo ku yaal Orient Express.
Xidhiidhka hoose wuxuu kaloo ku siinayaa cashar kooban oo ku saabsan sida loo ogaado jidkaaga agagaarka softiweerka:
Moovly waa softiweer sameynta fiidiyowga iyo tafatirka kaas oo si sahlan loogu adeegsan karo bilowgayaasha iyo waliba xirfadleyda.
Sababtoo ah xaqiiqda ah inay leedahay sheydo badan oo ku habboon baahida degdegga ah ee adeegsadaha.
Isticmaalayaasha ayaa jiidi kara oo soo tuuri kara walxaha kale, sida sawirrada, fiidyowyada, maqalka, iyo fiidyowyada firfircoon ee kaydinta deegaankooda.
Maktabaddeeda kaydsan ee ka kooban waxyaabaha warbaahintu, waa meel loo tago dadka aan lahayn warbaahin si ay u jiidaan ugana tuuraan is-dhexgalka isticmaalaha.
Iyo waxa intaa ka badan ee ku jira maktabaddiisa waa boqortooyo la'aan
Marka laga hadlayo tafatirka fiidiyaha, Moovly wuxuu siiyaa qalab loogu talagalay habaynta faahfaahsan ee waxa ku jira oo ay ku jiraan kala -goynta iyo/ama jaridda fiidyowyada, dib -u -habeynta, wareegga, goosashada, iyo hagaajinta xawaaraha maqalka iyo dib -u -ciyaaridda. Astaamaha kale ee horumarsan waxaa ka mid ah qaybaha kala-soocidda, ku darista heesaha maqalka ee dusha-ka-saaran, ku-darista cinwaan-hoosaadyo, iyo adeegsiga qoraalka-ku-hadalka.
Astaamaha Muhiimka ah ee Moovly:
Way fududahay in la isticmaalo astaamaha tafatirka.
Qaabab diyaarsan oo fara badan.
Maktabadda warbaahinta xorta ah ee Royalty.
Isticmaalayaasha ayaa iska kaashanaya mashaariicda fiidiyaha iyagoo adeegsanaya kooxaha isticmaala.
Dhammaan fiidiyowyada waxaa lagu bixin karaa Facebook, YouTube, Vimeo iyada oo aan lagu darin wax dheeri ah.
Waxay bixisaa shaqeynta qoraalka-ku-hadalka.
5. VSDC VIDEO MAQER
VSDC waa software tafatirka fiidiyowga oo si gaar ah loogu talagalay dadka isticmaala Windows. Waxay ka kooban tahay laba xirmo, lacag la bixiyay iyo. Baakado lacag la’aan ah sida kuwa soosaaraha softiweerka ah badankood.
Xirmadan bilaashka ah waxay bixisaa astaamo aad u fiican oo ay ku jiraan tifaftiraha aan tooska ahayn, shaandhooyinka Instagram-ka u eg, aaladaha daboolista, soo-dejiyeha YouTube-ka, bedelka faylka fiidiyowga, aaladda xasilinta, aaladda qabashada fiidiyowga, iyo taageerada 4K iyo HD dhoofinta.
Waxa kale oo ay ka kooban tahay qalab tafatir maqal ah, sida sixitaanka mugga, caadiyeynta dhawaaqa, dib -u -sheegid, echo, iyo barbaraha. Aaladaha maqalku waxay kuu oggolaanayaan inaad ku darto saamaynta raadadka maqalka ee fiidiyahaaga oo leh walaac yar intii suurtogal ah, sababtuna waa is -dhexgalkiisa dareenka leh oo ka faa'iideysanaya saaxiriin badan si loo hagaajiyo loona dardargeliyo tafatirka fiidiyaha iyo abuurista.
Mid kale oo ka mid ah faa'iidooyinkeeda ayaa ah in VSDC ay taageerto ku dhawaad ​​dhammaan qaababka fiidiyowga caanka ah iyo koodhyada sida MP4, AVI, MPG, MKV, FLV, 3GP, iyo WMV. Waxay kaloo taageertaa qaabab maqal ah sida WAV, MP3, M4A, PCM, iyo FLAC.
Si aad u dhammaystirto, dalabku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad tafatirto fiidiyowyo leh saxnaanta subpixel, si aad u gudbiso fiidyow leh wareejin siman, animation, isbeddel, iyo meeleyn sax ah.
Tilmaamaha Muhiimka ah ee Tafatiraha Fiidiyowga VSDC
Way fududahay in si toos ah loogu dhoofiyo fiidiyowyada shabakadaha bulshada, sida Moovly.
Waxay taageertaa tiro balaadhan oo ah maqal, muuqaal, iyo qaabab fiidyow.
Haysato qalab xasilinta maqalka.
Waxay taageertaa tafatirka fiidiyaha ee aan tooska ahayn.
dhisay-in DVD qalab gubanaya.
Sida VSDC, barnaamijkan waxaa loogu talagalay macbook OS iyo dadka isticmaala macruufka Apple inc.
Waxa kale oo ay leedahay istcimaal fudud oo adeegsade ah oo ka kooban jiiditaan-jiid-jiid. Si ka duwan softwares -yada kale ee ay tahay inaad kala soo baxdo ama ka iibsato goobo kala duwan, Imovie wuxuu ku yimaadaa aaladaha Mac.
Madalkani wuxuu ku siinayaa aqoon aasaasi ah oo ku saabsan samaynta fiidiyaha iyo tafatirka sida bilowga ah kahor intaadan sahamin softwares kale oo adag.
In kasta oo ay fududahay, haddana ma yaraynayso shaqadeeda tani waxay ka muuqataa aaladaha khalkhalka midabka, mawduucyada iyo aaladaha tafatirka maqalka badan
Waxay taageertaa fiidiyowyo 4k ah inkastoo ay tahay xirmo lacag la'aan ah.
La jaanqaadka fiidiyowyada la duubay ama aaladaha kale.
Illaa 70+ raadadka codka.
Maadaama software -kan kaliya laga heli karo aaladaha macbook -ga, halkaas uun baa lagu heli karaa.
Si kastaba ha ahaatee hoosta waa cashar ku saabsan sida loo sameeyo oo loo tafatiro fiidiyaha madasha:
Sida aalad samaynta fiidiyaha ee bilowga ah, clip premiere Adobe wuxuu u qalmaa labadaba codsi iyo softiweer.
Tani waa sababta oo ah waxay kuu oggolaaneysaa inaad awood u yeelatid sameynta iyo tafatirka fiidiyowyadaada taleefankaaga gacanta iyo haddii aad rabto inaad ku dhaqaaqdo cabbir xirfadeed, waxaad ku riixi kartaa Adobe premiere Pro cc si aad u tafatirto fiidiyaha xirfadeed ee laptop -kaaga ama desktop -kaaga .
Codsigan cum ee softiweerku wuxuu aad ugu habboon yahay isticmaaleha warbaahinta bulshada, maadaama uu kuu oggolaanayo fursad aad ku hagaajin karto fiidiyowyadaada lagu toogtay aaladdaada farshaxanno cajiib ah.
Muuqaalka muhiimka ah ee softiweerkani waa bixinta laba hab:
Si otomaatig ah oo bilaash ah.
Qaabka otomaatiga ah wuxuu u oggolaanayaa Adobe inay kuu gooyso goos goosyada oo geliso waxyaabaha lagu daro ee lagama maarmaanka u ah fiidiyahaaga.
In kasta oo qaab -dhismeedka bilaashka ahi kuu oggolaanayo inaad jilciso fiidiyahaaga kartida samaynta.
Adobe Premiere Clip ayaa sidoo kale lagu qalabeeyay qalab isku waafaqaya shaqadaada dhammaan aaladdaada oo dhan, xushmada Adobe CreativeSync ee cusub.
Fiidiyowga Clip -ka si sahlan ayaa loogu wadaagi karaa kanaalada warbaahinta bulshada ee caanka ah sida YouTube, Facebook, iyo Twitter.
Waxaad ka heli kartaa xiriirinta hoose:
Wave.video waa softiweer sameynta fiidiyowga onlaynka ah oo ku habboon suuqgeynta ganacsiyada yaryar ee doonaya inay soo saaraan nuxurka fiidiyowga hal -abuurka ah. Tilmaamaheeda ayaa kuu oggolaanaya inaad abuurto oo aad geliso xayeysiisyada fiidiyaha iyo fiidyowyada xayeysiinta ee gaagaaban.
Madalkani wuxuu la yimaadaa maktabad muuqaallo fiidiyoow ah iyo muusig sida moovly, oo kaa caawin kara inaad abuurto fiidiyowyo u eg xirfad-yaqaan si kor loogu qaado badeecadaha iyo adeegyada. Waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad ka doorato noocyada kala duwan ee qaababka. .
Waxay sidoo kale ku siineysaa jadwal bulsheed oo lacag la’aan ah oo kooxaha suuqgeyntaadu ay u habayn karaan si waafaqsan jadwalkooda. Iyada oo la adeegsanayo koodhadhka ku-meel-gaarka ah ee softiweerka, waxaad sidoo kale ku dari kartaa fiidyowyo bogagga shabakadaha kala duwan.
Maaddaama Wave.video ay tahay madal onlayn ah, uma baahna wax rakibid ah qaybta isticmaalaha. Dhammaan shaqada laga qabtay madalku si toos ah ayaa loogu keydiyaa daruuraha, taasoo u sahlaysa dadka isticmaala inay si aan kala go 'lahayn uga dhex shaqeeyaan aaladaha.
Astaamaha Muhiimka ah ee Wave.video:
Waxay la timaadaa maktabad cajalado fiidyowyo iyo sawirro aan boqornimo lahayn.
Waxay bixisaa marti-gelinta fiidiyaha ee la dhisay.
Waxay u oggolaanaysaa dadka isticmaala inay si dhakhso leh ula wadaagaan fiidyowyada kanaallada warbaahinta bulshada.
Waxay si otomaatig ah u soo saartaa koodhadh fiidyowyo.
Waxay bixisaa awoodaha qoraalka hoosaadka.
Waxay la timaadaa matoor bogga soo dega.
Lumen5 waa madal tafatirka fiidiyowga oo loogu talagalay inay ka caawiso ganacsiyada wadista taraafikada iyo ka -qaybgalka iyada oo loo marayo fiidiyowyo hal abuur leh. Faa'iidada ugu weyn ee Lumen5 ay ka leedahay software-ka kale ee tafatirka fiidiyaha waa awooddeeda tafatirka fiidiyaha ee AI-ku shaqeeya, taas oo si dhakhso leh ugu rogi karta qoraallada baloogga iyo maqaallada fiidiyowyo.
Ka sokow caawinta abuurista sheekada, tiknoolijiyadda AI-ku shaqaysa ee softiweerka ayaa sidoo kale ka caawisa dadka isticmaala inay ku habboonaan karaan qaab-dhismeedka iyo kor u qaadista farriimaha fiidiyowyada iyada oo loo marayo muusigga iyo muuqaalada habboon.
Softiweerku wuxuu kaloo bixiyaa astaamo kaa caawinaya inaad ka abuurto fiidyow xoqan. Waxay kaloo la timaadaa qaabab fiidiyowyo kala duwan oo badan, ha ahaato sheekooyinka Instagram, waxbarasho, suuqgeyn, ama YouTube. Waxaad u habayn kartaa fiidyowyadaada si ay ugu habboonaan summadaada adiga oo ka dooranaya nidaamyada midabka kala duwan, xulashooyinka font iyo gelinta astaantaada iyo astaamaha biyaha.
Maktabad warbaahineed oo ay ku jiraan malaayiin sawirro ah, fiidyowyo fiidiyow ah, iyo faylal maqal ah ayaa bixiya fursado badan oo lagu kobcin karo fiidyowyada.
Tilmaamaha Muhiimka ah ee Lumen5:
Waxay bixisaa astaamo qoraal-ilaa-fiidiyow ah si loogu beddelo maqaallada iyo qoraallada blog-ka fiidiyowyo.
Teknolojiyadda AI waxay u oggolaanaysaa dadka isticmaala inay ku abuuraan fiidyowyo daqiiqado gudahood.
Waxay la timaadaa maktabad la raadin karo oo ay ku jiraan malaayiin sawirro bilaash ah, fiidyowyo fiidiyow ah, iyo faylal muusig.
Waxay bixisaa ikhtiyaarro is -habeyn si fiidiyowyadu u waafaqaan sumcadda meheradda.
Avidemux waa tifaftiraha fiidiyaha bilaashka ah ee ugu fiican haddii aad tahay Windows, Mac OS, iyo Linux. Codsigu wuxuu dardar geliyaa hawlaha tafatirka fiidiyaha ee aasaasiga ah sida shaandhaynta iyo goynta, Avidemux wuxuu leeyahay is -dhexgal isticmaale oo nadiif ah oo aan qasanayn, kaas oo astaantiisa u fudud oo soo bandhigaya dhammaan aaladaha aad u baahan tahay si aad u dhammaystirto fiidiyahaaga.
Avidemux, waxaad ku koobi kartaa, gooyn kartaa, ama tirtiri kartaa qaybo ka mid ah fiidyowyadaada, oo ay weheliso xaqiiqda ah inay fududahay in lagu dhejiyo clip -ka mid kale.
Sidoo kale, waad ku dhex baari kartaa cajaladahaaga oo si fudud u soo bandhigi kartaa jumladahaas. Si kastaba ha ahaatee, Avidemux ma bixiso kala -guurid ama tirtiro dhaldhalaalaan si loogu daro fiidyowyada, taas oo ka dhigaysa garoon ay ku ciyaaraan kuwa bilowga ah marka loo eego aaladda adeegsadayaasha adeegsada.
Sidoo kale, Avidemux waxay la timaadaa Maareeyaha Shaandheynta Fiidiyowga taas oo fududeyneysa in la hagaajiyo midabka, dhalaalka, buuxinta, iyo midabka fiidiyahaaga.
Qalabku wuxuu taageeraa qaabab faylal fiidiyow oo badan, oo ay ku jiraan MPEG, AVI, MP4, DVD, iyo ASF. Waxa kale oo ku jira cod -weyne awood leh oo fududeynaya in loo beddelo faylasha maqalka iyo fiidiyaha qaabab kala duwan.
Qeybta ugu fiican ayaa ah in Avidemux uu adeegsado qaab weel si uu u kaydiyo faylasha, taas oo macnaheedu yahay fiidiyowyada iyo maqalka waxaa lagu kaydiyaa hal fayl, weel.
Tilmaamaha Muhiimka ah ee Avidemux
Waxay leedahay interface cad oo aan qasanayn.
Waxay la socotaa maareeyaha shaandheynta fiidiyaha oo fududeynaya shaandhaynta fiidiyaha.
Aaladda cod -bixiye lagu kalsoonaan karo waxay fududeyneysaa in lagu qoro fiidiyaha iyo faylasha maqalka.
Waxay soo bandhigaysaa isku-darka analog-waqtiga-dhabta ah.
Filmora waa aalad samaynta iyo tafatirka fiidiyaha oo loogu talagalay Wondershare oo loogu talagalay dadka aqoonta yar u leh samaynta fiidiyaha, kuwa bilowga ah, iyo kuwa aan caadiga ahaynba. Waa aalad la isku halleyn karo oo soo bandhigaysa is -dhexgal user xarrago leh oo siisa qalab tafatir awood leh si loo hagaajiyo tafatirka fiidiyaha.
In kasta oo ay ka maqan yihiin astaamo badan oo horumarsan, sida kartida kaamirooyinka badan iyo aaladaha VR, madalku wuxuu bixiyaa isku-dheelitirka caadiga ah, kala-guurka, jarista, iyo saamaynta caadooyinka ee kuu oggolaanaya inaad abuurto fiidiyowyo yaab leh.
Waxaa loo sameeyay aaladaha Windows iyo Mac, Filmora waa aalad samaynta fiidiyowga loogu talagalay abuurayaasha nooc kasta iyo heerarka xirfadda. Qalabkeeda dhawaaqa sida ka saarista dhawaaqa hore, barbaraha maqalka, iyo furaha furaha ayaa kuu oggolaanaya inaad ku darto codka ugu fiican fiidiyahaaga.
Ka sokow, saamaynta shaashadda cagaaran iyo taageerada fiidiyowyada buuxa ee 4K, waxay kaa caawineysaa inaad abuurto fiidiyowyo yaab leh oo leh xirmooyin u eg sida dhabta ah.
oo leh Filmora, way fududahay in la abuuro sheekooyin aad u wanaagsan iyadoo looga mahadcelinayo lakabyada badan ee warbaahinta.
Sidoo kale, Xirfadlaha 3D LUTs iyo shaandhooyinka hal -abuurka ah waxay la micno yihiin inaad ku gaari karto bilicsanaanta fiidiyaha ee ugu fiican hal guji.
Tilmaanta gaarka ah ee taas ka dhigaysa inay ka soo baxdo Filmora waxay u muuqataa inay tahay in shaqadeeda iyo is -dhexgalkeeduba ay bixiyaan qalooca barashada oo aad u yar isla markaana ay fududahay in la fahmo aasaaska tafatirka fiidiyaha iyada oo aan loolan lahayn.
Tilmaamaha Muhiimka ah ee Filmora
Waxay bixisaa shaandhooyin hal abuur leh iyo 3D LUTs.
Way fududahay in la hagaajiyo dhibaatooyinka kamarad sida ruxitaanka kaamerada.
Waxay bixisaa 100 lakab oo warbaahin ah.
Waxay la timaadaa saamaynta shaashadda cagaaran oo fududaynaysa halabuurka.
Waxay bixisaa aalado dhawaaqyo badan, sida barbaraha maqalka iyo furaha furaha.
12. QALABKA WARBAAHINTA
Laxamiistaha Warbaahintu waa aalad samaynta fiidiyaha oo lacag la’aan ah oo loogu talagalay Avid oo loogu talagalay hal -abuureyaasha soo socda, kuwa filim sameeya, iyo suuqgeeyayaasha fiidiyaha. Qalabkan samaynta fiidiyaha waxaa loogu talagalay inuu ka caawiyo dadka bilowga ah inay helaan xirfado qiimo leh oo ay bartaan sida loo tafatiro fiidyowyada iyadoo la adeegsanayo isla qalabkii ay adeegsadeen faa'iidooyinka.
Waxaa loo arkaa tifaftiraha fiidiyaha oo awood badan oo badan, Laxamiistaha Media wuxuu ku nool yahay filashooyinka wuxuuna leeyahay dhammaan aaladaha aad u baahan tahay si aad ugu abuurto fiidyowyo yaab leh gudaha goob xirfadeed.
Laxamiistaha Warbaahintu wuxuu la imanayaa jaangooyooyin badan, saamayn, iyo kala-guur oo kaa caawinaya ku-darista saameynta muuqaalka iyo muuqaalada feeraha ee fiidyowyadaada.
Sidoo kale, dalabku wuxuu bixiyaa istuudiyaha duubista dalwaddii oo fududeynaya in lagu daro qoraalka, saamaynta codka, cod -weyneyaasha, iyo shucuurta.
Si aad wax uga qabato, Laxamiistaha Warbaahinta wuxuu dhexgalaa Avid Link, kaasoo noqon kara kheyraad aan qiimo lahayn haddii aad rabto inaad ballaariso fursadahaaga iyo shabakaddaada.
Xirmada waxay isku daraysaa qulqulka shaqo-sare-u-HD-ga oo leh wadashaqayn waqtiga-dhabta ah si laguugu oggolaado inaad u sheegto sheekooyin ka wanaagsan, adigoon kharash garayn. Waxay kaloo bixisaa astaamo pro sida ducking audio iyo tafatirka Multicam waxaana ku jira aalado maareyn warbaahin oo otomaatig ah si ay kaaga caawiyaan inaad la socoto hantidaada.
Astaamaha Muhiimka ah ee Laxamiistaha Warbaahinta
Waxay si aan kala go 'lahayn ula midowday Avid Link.
Waxay bixisaa astaamo horumarsan, sida ducking audio iyo tafatirka kaamirooyinka badan.
Istuudiyaha duubista dalwaddu wuxuu ku habboon yahay ku -darista maqal qafiif ah.
Waxay bixisaa saameyno badan, presets, iyo kala -guur muuqaal oo cajiib ah.
Waxay fududeyneysaa in lagu daabaco waxyaabaha ku jira Facebook, Vimeo, iyo YouTube.
WeVideo waa aalad kale oo fiidiyoow iyo tafatirid fiidiyoow ah oo loogu talagalay abuurayaasha fiidiyaha, ganacsiyada yaryar, iyo milkiilayaasha meheradda gaarka ah.
Waxay isku daraysaa adeegsiga kaydinta daruuriga iyo aaladaha tafatirka fiidiyaha oo codsigoodu ku siinayo kantarool wanaagsan xagga hal -abuurka, oo kuu oggolaanaya inaad duubto, aragto, abuurto, oo wadaagto fiidyowyo gaaraya 480p.
Iswaafajinta WeVideo waxay ku jirtaa inay si aan kala go 'lahayn uga shaqayso daalacde kasta oo shabakad ah, waxayna sidoo kale ku siinaysaa barnaamijyo macruufka iyo Android ah oo kuu oggolaanaya inaad tafatirka fiidiyaha meel kasta, waqti kasta.
Tani waxay ka dhigan tahay inaad ku bilaabi karto howlahaaga tafatirka aaladdaada gacanta oo aad ku dhammayn karto kombuyuutarkaaga PC ama Mac. Sida Adobe Premiere clip.
Interface user ah oo dareen leh ayaa ku siinaya khibrad isticmaale oo ka fiican. Uma baahnid xirfadaha tafatirka pro si aad u abuurto filimaan cajiib ah; xaddidaadda kaliya ee waxa aad abuuri karto waa mala -awaalkaaga.
Si kastaba ha ahaatee, WeVideo ma bixiso ikhtiyaar otomaatig ah; taa beddelkeeda, aaladda samaynta fiidiyaha ayaa si buuxda kuu gelineysa kala -guurka, qoraallada, saamaynta dhaqdhaqaaqa, iyo waxyaabo kaloo badan.
Tilmaamaha Muhiimka ah ee WeVideo
Waxay bixisaa ilaa 1GB kaydinta daruurta.
Wuxuu adeegsadaa farsamada casriga ah sida WeVideo JumpStart.
Waxay siisaa dadka isticmaala illaa 5 daqiiqo oo ah waqtiga fiidiyaha la daabacay bishii
Qalabkan samaynta fiidiyaha ayaa xoogaa horumarsan wuxuuna siiyaa hab ka badan aaladaha aad ka filan lahayd tifaftiraha fiidiyaha ee bilaashka ah.
Isku -darka awoodaha tafatirka fiidiyaha ee aasaasiga ah (jaridda, kala -goynta, iyo tafatirka maqalka) oo leh xulasho astaamo horumarsan, HitFilm Express waxay kuu oggolaaneysaa inaad abuurto fiidyowyo iyo filimno leh saameyn 3D.
Waxaa weheliyay xaqiiqda ah in ay fududahay in la maareeyo haddii aad tahay qof bilaaw ah oo doonaya in uu helo aalad samaynta fiidiyowga.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira hawl ku lug leh taas oo ah qiimo yar oo la bixiyo si loo helo barnaamijka bilaashka ah.
HitFilm Express waxay kaaga baahan tahay inaad siiso iibiyaha qaylo ama la wadaagto cusboonaysiinta xaaladda warbaahinta bulshada si aad u hesho arjiga bilaashka ah.
Qaar ka mid ah astaamaha waaweyn ee uu dalabkani soo bandhigay ayaa ah 410+ saamayn iyo horudhac, jahwareer dhaqdhaqaaq, guddi qaabeyn cusub, furaha xaraashka animation, iyo awoodaha maaskaro
Waxa ka dhigaya HitFilm Express mid gaar ah ayaa ah inay bixiso casharro ku saleysan aflaamta caanka ah ee Hollywood. Tani waxay ka dhigaysaa casharrada mid soo jiidasho leh oo aad u soo jiidan kara isticmaaleyaasha hadda bilaabaya tafatirka fiidiyaha.
Waxaa intaa dheer, waxaad ku abuuri kartaa fiidyowyo gaaraya illaa xallinta 4K, tafatirka fiidiyowyada 360-digrii, iyo saxidda dhalan-rogga muraayadaha-dhammaantood adigoon qarash gareyn. Sidoo kale, haddii aad u baahan tahay astaamo dheeri ah si aad u sameyso fiidiyowyo tayo-xirfadeed leh, HitFilm Express wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ka iibsato xoogaa wax-ku-dar ah dukaanka iibiyaha si aad u ballaariso awoodiisa.
Tilmaamaha Muhiimka ah ee HitFilm Express
Waxay la timaadaa tifaftiraha fiidiyaha heer-xirfadeed.
Waxay taageertaa halabuurka 2D & 3D oo buuxa.
Waxay bixisaa casharo xiiso leh.
Waxay bixisaa kala guur aan xad lahayn iyo raadadka maqalka.
Shotcut, waa aalad samaynta fiidiyowga oo il furan oo laga heli karo Windows, Linux, iyo nidaamyada hawlgalka Mac.
Taasoo micnaheedu yahay, ka dib markaad soo dejiso xirmada, waxaad tafatiri kartaa koodhka ilaha oo aad u habeyn kartaa si aad ugu habboonaato habka aad u shaqeyso, gaar ahaan haddii aad tahay khabiir sameeyaha fiidiyaha ..
Laakiin kuwa bilowga ah, softiweerka ayaa si buuxda u qalabaysan, mana u baahnid inaad lacag ku bixiso casriyeyn dheeraad ah si aad u hesho dhammaan astaamaheeda.
Softiweerku wuxuu ugu fiican yahay isticmaaleyaasha khibrad ku filan ka helay aaladaha fudud oo doonaya inay u gudbaan heerka xiga.
Waxay leedahay fududahay in la isticmaalo UI si sahlan ugu filan adeegsadayaasha badan, iyada oo ay ugu wacan tahay soo -bandhigidda guddiyada la diyaarin karo iyo kuwa aan la furi karin, kuwaas oo si buuxda loo habeyn karo
La jaanqaadiisa 4K iyo HD qaraarrada iyo awooda tafatirka waqtiga asalka ah, waxay u taagan yihiin astaamo muuqda.
Sidoo kale, Shotcut wuxuu la midoobaa FFmpeg si uu u taageero dhammaan fiidiyowyada iyo qaababka maqalka ee caanka ah, wuxuuna tirtiraa baahida loo qabo soo dejinta faylka. Xitaa ka sii fiican, dalabka wuxuu kor u qaadaa tafatirka hooyo iyo raadinta qaab-dhismeed ee qaababka caanka ah.
Tilmaamaha Muhiimka ah ee Shotcut
Waxay bixisaa taageero noocyo badan oo kala duwan.
Waxay taageertaa xallinta 4K.
Waxay bixisaa fiidiyowyo badan iyo saamayn maqal ah.
Waxaa la iman set ah sifooyinka tafatirka waxtar leh.
OpenShot waa mid ka mid ah barnaamijyada tafatirka fiidiyaha bilaashka ah ee ugu fudud ee bilowga ah iyo kuwa sameeya filimada dhexdhexaadka ah iyo tifaftireyaasha.
Qalabkan samaynta fiidiyaha wuxuu diyaar u yahay dadka isticmaala Windows, Mac, iyo Linux.
Iyada oo ay fududahay in la isticmaalo interface user ka dhigaysa software tafatirka video weyn ee bilowga ah.
Sida aaladaha kale ee samaynta fiidiyaha ee kor ku taxan, OpenShot's interface interface iyo naqshadda ugu yar ayaa ku habboon tafatirka fudud.
OpenShot waa ikhtiyaar wax ku ool u ah ganacsiyada yaryar waxayna ugu fiican tahay dib -u -habeynta goos gooska, kor u qaadista, jaridda, xoqidda, iyo wareegga. Waxa kale oo ay bixisaa duubista amaahda, tallaabada jir, khariidaynta waqtiga, tafatirka maqalka, iyo horudhaca waqtiga-dhabta ah. Iyo waxa intaa ka sii badan, waxay ku timaadaa si lacag la'aan ah.
Jiid-iyo-hoos-u-shaqaynta si fudud loogu daro fiidiyowga, maqalka, ama faylasha muuqaalka
Lakabyada aan xadidnayn ee summadaha biyaha, fiidyowyada asalka ah, iyo raadadka maqalka
Kaarka cinwaanka-la-beddeli karo, qaab-dhismeedyada iyo saamaynta fiidiyaha Dijital ah, oo ay ku jiraan dhalaalka, gamma, hue, greyscale, iyo chroma muhiimka ah ee ka kooban saamaynta shaashadda cagaaran
Animation-key-jir xoog leh oo awood u leh abuurista fiidiyowyo firfircoon
17. MUUQAALAHA 10
Movie Maker 10 sidoo kale waa aalad kale oo sameynta fiidiyaha oo u imaaneysa sidii nooc bilaash ah oo ay kujirto qeybteeda fiidiyowga iyo aaladaha tafatirka sawirrada iyo sidoo kale awoodda lagu daro cinwaannada leh astaamo iyo midabbo la habeyn karo, waxa kaliya ee lagaa rabo waa inaad buuxiso shuruudaha PC ee softiweerka si loo soo dejiyo.
Shuruudaha ugu yar waa:
OS Windows 10 nooca 17763.0 ama ka sareeya
Dhismaha ARM, ARM64, x64, x86
DirectX Nooca 9
Qalabkaagu waa inuu buuxiyo shuruudahan loogu talagalay khibradda ugu fiican
DirectX, DirectX 12 API, Heerka Tilmaamaha Qalabka 11
Tilmaamaha muhiimka ah waxaa ka mid ah:
Aalad-hor-u-fiirinta tafatirka iyo saamaynta
Ikhtiyaarada filinka otomaatiga ah si loo abuuro googoyn la hagaajin karo oo ka mid ah fiidiyahaaga fiidiyaha ah
Tab animation si fudud loogu daro muusikada, cinwaannada, iyo dhibcaha
MAGISTO waa aalad samaynta fiidiyowga oo inkasta oo loo dhisay isticmaaleyaasha Chromebook sidoo kale loo heli karo isticmaaleyaasha ios.
Software -kani wuxuu adeegsadaa AI si uu u abuuro waxyaabaha fiidiyowga daqiiqado gudahood.
Waxay leedahay xirmooyin lacag la’aan ah oo la bixiyo oo qiimihiisu yahay $ 4.99 kaliya bishii.
Dhammaan inaad sameyso waa:
dooro qaabka tafatirka,
ku dar muuqaal, iyo
soo rog fayl maqal ah.
Si otomaatig ah ayey wax uga beddeshaa oo u samaysaa fiidiyahaaga.
Softiweerka ku shaqeeya AI wuxuu kaloo soo jeedinayaa muusig inuu la jaan qaado qaabkaaga iyo dulucda sameynta fiidiyaha.
appku wuxuu leeyahay dashboard aragtiyo fudud oo lagu dhisay.
Iyada oo leh in kabadan 90+ milyan oo isticmaale, waxay u socotaa inay dhahdo waa codsi ku habboon sameynta fiidiyaha
Mawduucyo kala duwan oo ballaaran
Aqoonsiga wajiga, shaandhaynta, saamaynta, iyo jaridda baabuurka
Awoodda tifaftirka otomaatiga ah
Awoodda lagu wadaago fiidiyowyada kanaallada suuqgeynta
isdhexgalka iStock ee sawirada saamiyada ee tayo sare leh
Soodejinta filimka HD ee aan xadidnayn
19. SHAQO -DHEER
Lightworks -ku wuxuu ka kooban yahay interface fudud oo dareen leh.
Lightworks waxay kaloo bixisaa maktabad casharro fiidyow ah, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah kuwa la heli karo oo sahlan si loo barto ikhtiyaarrada tafatirka fiidiyowga Linux ee liiskayaga.
Waxa kale oo loo heli karaa Windows, Mac.
Oo waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad tixgeliso haddii aad tahay bilowga sameynta fiidiyaha.
Lightworks waxay leedahay qayb ka mid ah fiidiyeyaasha asalka ah iyo heesaha muusigga ee ruqsad u haysta in lagu isticmaalo fiidiyow kasta oo aad wax ka beddesho barnaamijka, oo kuu oggolaanaya inaad si fiican u eegto fiidyow kasta oo suuqgeyn ah.
Waxa kale oo ay la timaaddaa lacag la bixiyay iyo lacag la’aan.
Hawlaha goynta fudud ee tayo sare leh ee tafatirka fiidiyaha oo deg deg ah
Hagaajinta xawaaraha, ayaa kuu oggolaanaysa inaad sii waddo tafatirka inta aad soo dejinayso waxyaabo cusub
Tafatirka Multicam ee isku -dubaridka clips -ka kamaradaha badan
Wadaagga mashruuca kooxda waqtiga-dhabta ah oo si buuxda gacanta ugu haya kaas oo adeegsaduhu marin u leeyahay tafatirka
Wadaagista fiidiyowyada oo si fudud loogu dhoofiyo YouTube, Vimeo, Facebook, iyo Instagram
Taageerida qaabab badan oo fiidyow ah.
Powtoon waa aalad samaynta fiidiyaha halkaas oo aad ku abuuri karto fiidiyowyo xirfadeed oo si buuxda loo habeeyay.
Waxay bixisaa nooc bilaash ah iyo saddex qorshe oo lacag ah.
Waxay ka kooban tahay sawir -gacmeed aad u ballaadhan oo fiidiyaha ah oo aad si fudud u tafatiri karto qaab -dhismeedyada aad doorbidayso.
Qorshaha bilaashka ah, waxaad ku samayn kartaa fiidyowyo gaagaaban, oo soconaya ilaa saddex daqiiqo.
Soosaarkaagu wuxuu la yimaadaa sumadda biyaha Powtoon, waxaadna adeegsan kartaa xulashada heesaha dhawaaqa xorta ah oo dooro walxaha aan boqornimada lahayn.
Waxaad ka heli doontaa tusaalooyin badan qaybaha sida Suuqgeynta, Iibinta, Tababarka, Barashada & Horumarka, Comms -ka Gudaha, HR, Warshadaha, iyo inbadan.
Sidaad ka garan karto hadafka Powtoon, “Sidaas darteed qof walba wuu noolaan karaa,” barnaamijku wuxuu xooga saarayaa animation -ka, iyadoo aaladda samaynta fiidiyaha ay ugu habboon tahay bilowga iyo xirfadleyda labadaba
Intii lagu gudajiray maqaalkan, waxaan awoodnay inaan kuu soo bandhigno 20 -ka ugu wanaagsan ee qalabka fiidiyowga bilaashka ah ee bilowga ah, annaga oo taxay astaamaha u gaarka ah, shaqooyinka iyo halka laga heli karo.
Waxay ku liis -gareeyeen amar gaar ah, sidaas darteedna qof kasta oo aad doorato wuxuu keeni doonaa natiijo dhab ah. Waxa kale oo aan rajaynaynaa in maqaalkani u ahaan doono bakhaar bilowga ah iyo xirfadleyda labadaba.
Dib -u -eegista Blippi 2021: Lacag intee le'eg ayay Blippi Sameysaa
Ma waxaad tahay ganacsade e-commerce ama milkiile meherad yar oo raadinaya waddooyin aad ku heli karto…
Lacag Ma Ka Sameyn kartaa Snapchat 2022? Jawaab Khubaro ah
Snapchat wuxuu bixiyaa wax ka badan sawirro qurux badan iyo fiidiyowyo goof ah. Sida muuqata, hadda waa barnaamij lacag-sameynta ah. Alaabta…